Hubinta Tayada - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Si loo hubiyo tayada joogtada ah iyo badbaadada alaabada adag, waxaan hirgelineynaa nidaamka hubinta tayada oo dhameystiran.
Nidaamyada xakamaynta tayada wanaagsan ee loo qaabeeyey waxay keenaan alaab tayo sare leh. Waxaa naga go'an isticmaalka HACCP iyo talaabooyinka kale ee muhiimka ah ee xakamaynta tayada, laga bilaabo tayada heerka dejinta, daboolaya alaabta ceeriin, alaabada semi-dhammeeyay iyo alaabooyinka dhammaaday. Kaliya alaabooyinka dhammeystiran ee aqoonta u leh oo aan cillad lahayn ayaa suuqa soo geli kara.
Biyahayaga wax soo saar ee ka yimaada webiga guga guga, si loo hubiyo tayada wax soo saarka oo aad u wanaagsan. Qalabka ceyriin wuxuu ka yimaadaa maqaarka doofaarka cusub, lafaha lo'da iyo wixii la mid ah ee soo maray karantiil waaxaha caafimaadka.
Geedi socodka wax soo saarka
Midowga Yurub iyo Waaxda Beeraha ee Mareykanka waxay qeexayaan: soo saarida gelatin ka dib 3 maalmood oo ah aashito, 35 maalmood oo dambas ah, xalka gelatin ka dib jeermiska ka dib 138 ℃ 4 ilbidhiqsi oo loogu talagalay alaab ammaan ah (yacni bilaa BSE). Si kastaba ha noqotee, shirkadeena waxay runti isticmaashaa habka wax soo saarka ee soo saarista aashitada hydrochloric iyadoo fiirsigeedu ka badan yahay 3.5% ugu yaraan 7 maalmood, dambas dambas ugu yaraan 45 maalmood, iyo xalka xabagta oo jeermiska looga dhigay 140 ℃ 7 ilbidhiqsi.
Wax soo saarkayagu waa ka gudbeen ISO22000, HALAL, shahaadada HACCP, shirkadduna waxay leedahay "Liisanka Wax Soo Saarka Daroogada" iyo "Shatiga Soosaarka Cuntada" oo ay soo saartay Maamulka Cuntada iyo Dawada ee Gobolka.
Si daallan loo tijaabiyey
Nabadgelyadu waa mudnaanta koowaad, waxaan kaliya siineynaa alaabada gelatin ammaan ah suuqa. Geeladeena ayaa si adag loo baaray oo looga ansaxiyay xaruntayada baaritaanka waxayna leeyihiin heerar tayo sare leh iyo liis tijaabo oo dhameystiran. Taasi waa sababta aan u buuxin karno ama uga badnaan karno shuruudaha nabadgelyada ee ugu sarreeya.